Cilmibaaris midaysay dalalka isdiidan ee Bariga Dhexe - BBC Somali
Cilmibaaris midaysay dalalka isdiidan ee Bariga Dhexe
Lahaanshaha sawirka KATE STEPHENS
Image caption Dhibaatooyin dhanka maalgalinta ah ayaa ka mid ahaa waxyaabihii dib u dhigay mashruucan
Xarun cilmibaaris oo casri ah ayaa maanta laga furayaa dalka Urdun, waana mid ay wadaagi doonaan dalalka gobolka qasan ee Bariga Dhexe, waana astaan naadir ah oo muujinaysa wax uu ku midaysan yahay gobolkaasi.
Dareenka siyaasadeed iyo muranada dalalkaas ka dhexeeya ka sokow waxay ku midoobeen taageerada qorshahan.
Cilmibaaristan waxaa loo bixiyay Sesame.
Xarunta cilmi barista waxaa yaala shaybaar wayn oo awood badan.
Cilmibaareyaasha ka hawlgalaya oo ay ka mid yihiin Falastiiniyiin Israa'iiliyiin iyo Iiraaniyiin oo aan caadiyan marnaba u kulmi doonin ayaa xaruntan cilmi baarista iyo shaybaarkan wayn wada adeegsan doona.
Dadka Afrikaanka ah oo 46% ay dhiigkar qabaan
Cilmibaaris: Saliidda kalluunku waxba kuma kordhiso garaadka carruurta
Urdun oo IS ku weerartay gudaha Suuriya
Akhwaan Muslimiinta oo ku soo noqday doorashada Urdun
Urdun oo maxaabiis daldashay
Dismeyaasha xarunta cilmi barista ee Sesame oo badankoodu caddiin yihiin ayaa ku yaalla buuro boodh badan oo 35 kiiloo mitir u jira caasimadda Urdun ee Cammaan.
Image caption Shaybaadh awood badan ayaa ka mid ah xarruntan cilmi baarista
Image caption Sesame waa middii koobaad ee nooceeda ah ee bariga dhexe laga hirgaliyo
23 Febraayo 2017
2 Maarso 2017
Maqal Dhibaatada caafimaad ee ay hooyooyinka kala kulmaan carruurta ku dhinta uurkooda
12 Abriil 2017